Fiangonana ortodoksa atsinanana - Wikipedia
Fiangonana ortodoksa atsinanana
(tonga teto avy amin'ny Fiangonana tsy Kalkedoniana)
Ny Fiangonana ortodoksa atsinanana, izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Fiangonana tsy kalkedoniana na Fiangonana tsy kalsedoniana, dia ireo fiangonana kristiana tranainy izay niorina araka ny Konsilin'i Nikea (taona 325) sy ny Konsily voalohan'i Konstantinopoly (taona 381) ka atao hoe Fiangonan'ny konsily roa, araka ny filazàn'i Antoine Arjakovsky, na koa niorina araka ireo konsily roa ireo sy ny Konsilin'i Efeso (na Efezy na Efesosy) (taona 431) ka atao hoe Fiangonan'ny konsily telo. Tsy isan'ny Fiangonana ortodoksa atsinanana izany ireo atao hoe Fiangonanan'ny konsily fito, izany hoe ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana.
Maro anefa ireo mpanoratra izay mihevitra fa ny atao hoe "Fiangonana ortodoksa atsinanana" dia tsy ahitana afa-tsy ireo Fiangonan'ny konsily telo ka miavaka amin'ny Fiangonan'ny konsily roa izay tsy anisany   . Misy koa ireo loharano izay manao ny Fiangonan'ny konsily telo ho hany Fiangonana ortodoksa atsinanana   .
Ny Fiangonana ortodoksa atsinanana no laharana fahefatra amin'ny fivavahana kristiana raha ny isan'ny mpino ao aminy no jerena izay miisa 75 000 000 any ho any. Tsy anisany ireo fiangonana atao hoe Fiangonan'ny konsily fito na Fiangonana ortodoksa tatsinanana.
2 Ireo Fiangonana ortodoksa atsinanana
2.1 Fiangonan'ny Konsily roa
2.2 Fiangonan'ny Konsily telo
2.3 Fiangonana naorin'ny Apostoly
Ireo Fiangonana tsy kalkedoniana ireo dia tsy miombom-pandraisana ny eokaristia na ny fanasan'ny Tompo amin'ireo fiangonana atao hoe "Fiangonana ortodoksa (kalkedoniana)" na "Fiangonana ortodoksa (bizantina)" "hatramin'ny fisarahana tamin'ny taona 451 sy ny fifandirana kristolojika: ireo voalohany, izay nilahatra niaraka tamin'i Kirilo avy any Aleksandria, dia nanohitra ny faharoa (nivoaka avy amin'ny sekoly antiokiana) izay miresaka ny amin'ny "natiora" (phuseis) roan'i Kristy, izay heverin'ireo voalohany ho fizaràna ny personan'i Kristy, ka nisafidy ny filazana ny "physis n'Andriamanitra Teny tonga nofo". Mifanohitra amin'izany ny an'ireo Fiangonana kalkedoniana izay nanahy sao very ny iray amin'ireo natiora roan'i Kristy raha arahina io fitenenana faharoa io ("ny natioran'Andriamanitra Teny tonga nofo"), ka nanao ireo mpifanohitra aminy hoe "monofizita" (mpanaraka ny "natiora tokana"). Ireo "Monofizita" kosa nanao azy ireo hoe koa "Diofizita" (mpanaraka ny "natiora roa"). Na dia nisy aza ezaka fampihavanana nataon'i Joany avy any Antiokia mba hampisy marimaritra iraisana eo amin'ireo fampianarana roa ireo ka nananterany ny maha tokana ny personan'ireo natiora roa ireo sy niezahany namaha ny olana mamaivain'ny "Theotokos" (renin'Andriamanitra) momba an'i Maria renin'i Jesosy, dia tsy nahaleo ny fiheverana ara-politika izay nampivaky ny patriarkatan'i Aleksandria sy ny patriarkatan'i Konstantinopoly ary niteraka ny fisarahana taorian'ny Konsily tao Kalkedona, izay nampisaraka ny tontolon'ny kristianisma, ka nisy fiantraikany lehibe tany Atsinanana izany tamin'ny fidiran'ny finoana silamo.
Ireo Fiangonana ortodoksa atsinananaHanova
Ireto avy ireo isan'ny Fiangonana ortodoksa atsinanana:
Fiangonan'ny Konsily roaHanova
Ny konsily voakasika eto dia ny Konsily voalohany tao Nikea (taona 325) sy ny Konsily voalohany tao Konstantinopoly (taona 381). Ireto avy ireo fiangonana ireo:
Fiangonana ortodoksa asiriana (na Fiangonana apostolika asirianan'ny Atsinanana);
Fiangonana siriana kaldeana (na Fiangonana malabara ortodoksa);
Fiangonan'ny Konsily teloHanova
Ny konsily telo resahina eto dia ireo konsily roa voalohany sy ny Konsily tao Efeso (taona 431). Ireto avy ireo fiangonana ireo:
Fiangonana kopta ortodoksa;
Fiangonana etiopiana ortodoksa teoahedo;
Fiangonana etiopiana ortodoksa an-tsesitany;
Fiangonana ortodoksa eritreana;
Fiangonana siriaka-malankara ortodoksa;
Fiangonana ortodoksa malankara ao Atsimon'i India;
Fiangonana ortodoksa armeniana;
Fiangonana jakobitan'i Mesopotamia.
Fiangonana naorin'ny ApostolyHanova
Ny ankamaroan'ny Fiangonana tsy kalkedoniana dia milaza, araka ny lovantsofina, fa ireo apostoly voalohan'i Jesosy na ny mpiatatr'ireo no nanorina azy:
i Bartolomeo (na Bartelemy) sy i Tadeo (atao hoe koa Joda Zelota) ho an'ny Fiangonana apostolika armeniana;
i Tomasy ho an'ny Fiangonana siro-malabary ortodoksan'i Kerala.
Amin'izao taonjato faha-21 izao ny ankabetsahan'ny mpino ao amin'ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana dia monina ao Etiopia, ao Eritrea, ao Egipta, ao Siria, ao Libàna, ao Armenia, ary ao India. Misy zanaka am-pielezana maro ao Eoropa, any Amerika Avaratra, any Amerika Atsimo ary koa any Aostralia. Ny fitambaran'ireo Fiangonana ireo dia misy mpino 60 000 000 any ho any izay somary manana ny andrim-pinoany avy, ka ny kely indrindra dia tsy ahitana mihoatra ny mpino 1000, nefa ny Fiangonana etiopiana ortodoksa, izay farany lehibe, dia ahitana mpino manakaiky ny 40 000 000.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_ortodoksa_atsinanana&oldid=990949"
Dernière modification le 9 Mey 2020, à 15:40